Ziziphi iindlela zokujonga amanqaku e-backlinks?
Eli nqaku lizinikezelwe kumxholo wekhonkco esemgangathweni. Siza kuthetha ngeendlela i-Google ezivavanya ngayo umgangatho weekhonkco ezingenayo kunye nendlela onokulinganisa ngayo umgangatho weekhonkco kwikhankaso yokwakha ikhonkco.Ezi ziinkalo ze-injini yokucwangcisa iinjongo ezibalulekileyo zokudala ifayile yekhonkco. Kukho iintlobo ezininzi zokufumana i-juice ye-link efanelekileyo kwiziko lakho. Okokuqala, uya kuphakamisa igunya lakho lokuthengisa kwi-market niche yakho nakwiwebhu ngokubanzi. Ngaphezu koko, ukulandela i-backlink inayo ijusi yeluncedo kwisiza sakho. Ukuba bevela kwimithombo ephezulu yewebhu, bangakwazi ukuphakamisa ikhankaso yephepha lakho lewebhu kunye nokutsala abaninzi abathengi abatsha.
Kubalulekile ukwazi umgangatho wezonxibelelwano ezibhekiselele kwisayithi lakho ngenxa yokuba le mihla yangasese isebenza njengendlela yokubeka indawo kwaye ingenza ngcono isigaba sakho sesayithi kwiphepha lekhasi lokukhangela okanye uchithe yonke imizamo yakho ye-SEO. Kwiintsuku zethu, akuzona zonke i-backlinks eziphathwe ngokulinganayo. Kukho ezininzi i-spammers kunye nabakhohlisi abazama ukwenza iinjinjini zosesho ze-game kwaye bafumana izixhumanisi kwiindlela ezahlukeneyo ezingekhoyo. Esikhundleni sokubala nje inani leekhonkco zangaphandle ezibhekisela kwikhasi lewebhu, iGoogle iphinda ihlole umgangatho wezonxibelelwano ezingenayo. Ngokuchanekileyo, i-Google ithatha igunya lokuphendula, ukubaluleka, isikhundla, kunye nemeko yokuhlela yazo zonke iikhonkco ezikhomba kwindawo yakho.
Yingakho udinga ngokucokisekileyo ukujonga iingongoma zengxubeko njengoko izikhonkwane ezimbi zingonakalisa idumela lakho lomnxeba kwaye zenze ukuhla kwezinga. I-Google ihlawulisa imithombo yewebhu ephula izikhokelo zayo zeWebhster ngezinga eliphantsi, izixhumanisi ze-spammy. Yingakho ukuba uye waphawula umgangatho ongezantsi oqhagamshelwano oluya kwisiza sakho, kufuneka usebenzise i-Google Disavow ithuluzi ukwenzela ukuba angabikho kwizinto zombini zokukhangela kunye nabasebenzisi.
Makhe sixoxe ngeendlela ezisebenzisayo ze-Google ukucacisa amanqaku e-backlinks.
Iimpawu ezithathwa ngqalelo yiGoogle ngelixa zigqiba amanqaku e-backlinks.
Igunya le-domain, igunya lephepha kunye nePrankRank
Enye yezona zinto ezibalulekileyo ekunqumeni umgangatho wezonxibelelwano ezingenayo ligunya lomthombo web ziza kuzo. Imodeli ye-PageRank isekelwe kulungelelaniso lwekhonkco kunye nokuhamba kwekhonkco. Ephakamileyo igunya le-site, i-juice ye-link ekhethekileyo oyifumanayo nge-backlink.
Ukubala igunya lekhasi eliyisiqalo okanye umthombo wewebhu, ungasebenzisa iSemalt Web Analyzer okanye iToam Tool. Ngokuncedwa kwezi zixhobo, unokumisela iSigqeba soLawulo lweDesi kunye neGunya lePhepha kumthombo wewebhu. Kwi-URL nganye enikeziweyo, uya kufumana amanqaku ukusuka ku-1 ukuya ku-100. Eziphakamileyo zezi methrikhi zizinto ezixabisekileyo ngakumbi.
Ngaphezu koko, unokujonga isithuba sezixhumanisi ezingenayo, usebenzisa iSofthiwe ye-Majestic SEO. Le software izakukubonelela ngamatrikrikhi njenge "Trust Flow" kunye ne "Citation Flow". "Kwinkimbinkimbi, le parameters izokubonisa ulawulo lwe-link ye URL. Eziphakamileyo zombini zezi methrikhi, zibaluleke ngakumbi ukuxhunywa kwesi siza kuya kuba.
Ukubaluleka komxholo okanye umthombo wewebhu
iGoogle ibe yingqiqo kule mihla kwaye ingaba lula kangakanani umxholo wemithombo yewebhu kwikhonkco elingafakiyo kufakwe kuyo. Ingachazwa yinjongo ephambili ye-Google ukuhambisa kuphela umgangatho ophakamileyo kodwa kwaye ngokugqithiseleyo kuhambelana nemiphumo yombuzo womsebenzisi.
I-Google ilinganisa ukufaneleka kwezinto ezisemgangathweni yomthombo web ngokusebenzisa iziqulatho zayo eziqulathekileyo kunye neengcamango ze-anchor zezi zixhumanisi. Yingakho kufuneka uhlawule ngokukodwa ukufaneleka kwetheksi yakho yesikebhe. Sebenzisa igama legama lakho okanye igama eliphambili legama elingundoqo njengombhalo we-anchor wekhonkco yakho.
Ukufumana i-backlink kwimithombo efanelekileyo yewebhu ehambelana nendawo yesifundo sakho kwisizinda sakho iya kukhulisa isikhundla sakho sokubeka indawo kwindawo ethile yokukhangela Source .